APUS Launcher အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（29.6MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် APUS Launcher: Theme&Call Show
Android launcher ထက် ကျော်လွန်.
Apus စနစ်။ သင့်ဖုန်းကိုအထူးပြုလုပ်ပါ။
Google Play တွင် Android launcher တစ်ခုအနေဖြင့်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
apus launcher, အစာရှောင်ခြင်း, သေးငယ်ပြီးစတိုင်, စမတ်ကျပြီးထိရောက်သောအရာများ, Wallpapers, Call Show, Features များ, ခေါ်ဆိုမှုပြပွဲ,
APUS Launcher အသစ်သည်စတိုင်နှင့်လှပသောမိုဘိုင်းအကြောင်းအရာများ, Carto & TV Launcher Themes, Cartox Android Launcher Themes, Pink နှင့် Cutroid Launcher Themes, Golden ပန်းပွင့်များ, themes, စီးပွားရေးအကြောင်းအရာများ, မှော်အကြောင်းအရာများနှင့်ပွဲတော်အတွက်အခြားအထူးဆောင်ပုဒ်များစွာ။ သင်၏ Android ဖုန်းဘ0ကိုအပတ်စဉ်အမျိုးမျိုးဖြင့်သီတင်းသုံးပြုလုပ်ပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနောက်ခံပုံကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိဘဲသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Apus Launcher သည်သင်၏ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်ကိုအေးမြ။ စတိုင်ကျစေရန်အတွက်အံ့သြဖွယ်ခေါ်ဆိုမှုပြပွဲများကိုပေးသည်။
APUS Launcher သည် Smart Folder ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းများ, ဝှက်ထားသောအက်ပ်များ, ဝစ်ဂျက်များ (နာရီ, ပြက္ခဒိန်, ရာသီဥတု, ရာသီဥတု, ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်) ၎င်းသည်သင့်ဖုန်း၏ကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
apus launcher သည်သင်အမှန်တကယ်လိုချင်သည့်အရာဖြစ်သည်။
thenew Themews နှင့်စတိုင်ကျသည့်နောက်ခံပုံများ သင့်ဖုန်းကိုပိုမိုလှပစေရန်။
- သင်၏ရုပ်ပုံကိုသင်၏နောက်ခံပုံများအဖြစ် တင်. ကမ္ဘာ၏အသုံးပြုသူများနှင့်လည်းမျှဝေပြီးအခြားသူများထံမှ "အကြိုက်" ကိုမျှဝေပါ။ နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိုသောရုပ်ပုံများကိုပြခန်းတွင် download လုပ်ပါ။
--change icon size ကိုရွေးချယ်ပါ။
အကူးအပြောင်း၏ - အစာရှောင်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု ★ Highlight features
- -hide apps များ - သင်၏လျှို့ဝှက်အက်ပ်များကိုဖျောက်ထားပါ။ interface ပေါ်တွင်လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းဖြင့်ပွတ်ဆွဲပါ။ သင်ဖုံးကွယ်လိုသောအက်ပလီကေးရှင်းများ၏အိုင်ကွန်များကိုရွေးချယ်ပါ။ Apus သည်သင်၏ privacy ကိုအကာအကွယ်ပေးရာတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
News, ရာသီဥတု, အသွားအလာ, သင်လိုအပ်သမျှကိုပွတ်ဆွဲပါ။
-Widget: Weather Forelecast ဝစ်ဂျက်, Clock Widget နှင့် Headline ဝစ်ဂျက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
အနီးအနားမှာရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ရတာ။ app တစ်ခုနှင့်ဖြေရှင်းပါ။
Apus Launcher သည်သင်၏စိုးရိမ်မှုများအားလုံးအတွက် All-In-one ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ ဤလွှတ်တင်စက်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသုံးစွဲသူအမြောက်အများရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသူတို့ဘာပြောတာကိုစစ်ဆေးကြည့်ရအောင်။
APUS အုပ်စုသည်သင့်အားချောချောမွေ့မွေ့နှင့်အလွန်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံများကိုပေးရန်အကောင်းဆုံးကြိုးစားလိမ့်မည်။ နှင့်ပိုပြီးလှပသော။
b> :: [email protected]
online0န်ဆောင်မှု
Apus launcher information Apus launcher is the best launcher
Technical of Intelligence Nagesh
okay very good 👍👍👍👌👌
Tun taung Kyi nyo